Wordpress အသုံးပြုနည်း – ၁ – AnZarTone
ဒါက WordPress.Com ပါ
Free Blog တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဒါလေးကို အရင်နှိပ်ရပါမယ်
ဒီနေရာကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာကတော့ Free Blog အတွက် Form ဖြည့်ပေးရမယ့် နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Form ကို ဒီလို ဖြည့်ပေးရပါမယ်
ဒါကလည်း Form ထဲမှာ ထပ်ဖြည့်ရမယ့် ပုံစံပါ
ဒါကတော့ နမူနာ ပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်
အပေါ်မှာ အားလုံး ဖြည့်ပြီးသွားရင် အောက်ဆုံးနားက ဒါလေးကို နှိပ်ပါ
ဒီနေရာကို ရောက်သွားရင် ကိုယ့်အီးမေးလ်ကို သွားပြီး စစ်လိုက်ပါ။ WordPress က ပို့ထားတဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အီးမေးလ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ WordPress ရဲ့ မေးလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ Free Blog ကို Activate လုပ်ဖို့အတွက် Activate Blog ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ကွန်နက်ရှင် နှေးနေရင် ဒီလိုလေး အရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ စောင့်လိုက်ပါ။
ဒီနေရာကို ရောက်လာရင် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ပုံစံကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေက ဘလော့ဂ်ပုံစံ ရွေးတဲ့နေရာ အောက်ဆုံးနားမှာ ရှိပါတယ်။
ရွေးမယ်ဆို ကလစ်လေးသာ နှိပ်လိုက်ပါ
ကလစ်နှိပ်ပြီး တစ်ခုခုကို ရွေးလိုက်ရင် အတည်ပြုဖို့ ဒီလိုလေး ပေါ်လာပါတယ်။
ဒါကတော့ Theme ကို Activate လုပ်နေတဲ့ ပုံစံလေးပါ
ဒီနေရာကို ရောက်သွားရင်တော့ WordPress နဲ့ Free Blog တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း ပြီးသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်
ညာဖက်အပေါ်ထောင့်နားက ကိုယ့်ဘလော့ဂ် နာမည်လေးပေါ် မောက်ကလေး တင်လိုက်ရင် ခုလိုလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ WordPress ရဲ့ Dashboard ဆိုတဲ့ နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျနော် နမူနာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Blog ပါပဲ
နောက်ပို့စ်တွေကျမှ ပို့စ် ဘယ်လို တင်ရမယ်။ ဘလော့ဂ်ပုံစံ ဘယ်လို ပြောင်းရမယ် ဆိုတာ ပြောပေးသွားပါမယ် …
ဒီပို့စ်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ …………… ။
This entry was posted in How To and tagged using wordpress. Bookmark the permalink.
← WordPress အား အသုံးပြုထားသည့် နိုင်ငံတကာသတင်းစာများ
Free Gmail Account လိုချင်သူများ →
One thought on “WordPress အသုံးပြုနည်း – ၁”
Pingback: Wordpress အသုံးပြုနည်း – ၁ – AnZarTone – forshow